अनमोलको ‘कृ’ ले कस्तो गर्यो त ओपनिङ ? « Ramailo छ
अनमोलको ‘कृ’ ले कस्तो गर्यो त ओपनिङ ?
अन्ततः अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ देशका एक सय बढी हलहरुबाट प्रदर्शनमा आएको छ । झण्डै साढे तीन करोड लगानीमा दुई वर्ष समय लगाएर निर्माण गरिएको अनमोलको यो पाँचौ फिल्म निकै प्रतिक्षामा थियो । प्रदर्शनको पहिलो दिन यो बहुप्रतिक्षित फिल्मले कस्तो व्यापार गर्यो त ?
प्राप्त जानकारी अनुसार अनमोलको ‘कृ’ ले प्रदर्शनको पहिलो दिन झण्डै ६५ प्रतिशत अकुपेन्सी कायम गरेको छ । विशेष गरी अनमोलका युवा फ्यान राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलहरुमा ‘कृ’ हेर्न पुगेका छन् । शुक्रबार, बिहानी शो सुखद रहेको फिल्मले मध्यान्ह्बाट उच्च अकुपेन्सी कायम गरेको हलवाला बताउँछन् । निर्माता भुवन केसीले शनिबार देशका हरेक हल हाउसफूल हुने अपेक्षा राखे । दर्शक प्रतिक्रिया हेर्नुस् :
कस्तो छ त कृ ?
करिब डेढ वर्षपछि दर्शकमाझ आएका युवा स्टार अनमोल केसीलाई उनका शुभ चिन्तकले स्वागत गरेका छन् । फ्यानले विशेषतः उनको लुक्स र फाईटको प्रशंसा गरेका छन् । नव-नायिका अदीति बुढाथोकी र भिलेन अनुप विक्रम शाहीको अभिनयलाई पनि दर्शकले मन पराएका पाइयो । यस्तै अभिनेता सरोज खनाल, अभिनेत्री रुपा राना र कलाकार कामेश्वर चौरसिया लगायत कलाकारहरुले फिल्ममा आफ्नो भूमिकालाई न्याय गरेका छन् ।
निर्माता सुवास गिरी र भुवन केसीको लगानी फिल्ममा प्रशस्त देखिन्छ भने सिनेम्याटोग्राफर पुरुषोत्तम प्रधानको मिहेनत पनि पर्दामा प्रष्टैसँग झल्किछ । फिल्मको ‘यति यति पानी’ गीत हिट भैसकेको छ । द्धन्द्ध निर्देशक चन्द्र पन्त ‘कृ’ को अर्को हिरो हुन् । पन्तले फाइट सिनमा निकै मिहेनत गरेका छन् । तर के ‘कृ’ ले नेपाल रिलिजबाटै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ला त ? फिल्म नगरीमा अहिले यही प्रश्नको चर्चा छ । अनमोल र अदीतिसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :